के फ्रिभ फ्रीज ड्राई फूड भनेको हो?
फलफूल जीवन फ्रिज सुक्खा खाद्य उत्पाद लाइन फलहरु को लागी, शाकाहारी, मासु, सिमी, अन्न, दुग्ध, र स्वस्थ पेय र भोजन पनि, तपाईंले किराना स्टोरमा यात्रा बचत गर्दै हरेक पटक जब तपाईं अण्डाहरू वा दूध जस्ता आवश्यक पदार्थहरू चलाउनुहुन्छ.
यी खानाहरू केही दिन ... वा केही हप्तामा खराब हुँदैन. तिनीहरू राम्रो छन्.
तपाईं पग्लिनु हुनेछैन, अपमानजनक, वा कच्चा मासु काट्ने.
र त्यहाँ स्वादको एक अतिरिक्त फुट छ तपाईं कहिँ भेट्टाउने छैन! बस एक काट्नुहोस्!
जब तपाइँ तपाइँको दैनिक व्यंजनहरु मध्ये एक को लागी एक घटक चाहिन्छ, केवल थ्रिभ उत्पादन चयन गर्नुहोस् र यसलाई मिक्समा थप्नुहोस्- भर्खरको जस्तो तपाई ताजा सामग्रीको साथ. तपाइँको भान्छामा फलिफाप राख्नु भनेको आफ्नै घरको बजार भएको जस्तै हो घरको खाना स्टोर, तपाइँको परिवारले मनपराउने सबै खानासँग पूर्ण भण्डार गरिएको. स्थानीय किराने पसलबाट पछाडि र हतार नगरी बचत गर्ने समय तपाईको गतिविधिहरूको आनन्द लिई गर्न सक्ने समयको निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छ।.
ThriveLife द्वारा आज फ्रिज फ्रिज सुकाएको खानाहरूको प्रयास गर्नुहोस्. तिनीहरू स्वादिष्ट र स्वस्थ छन्. यो तपाईंको खरीद तरीका बदल्छ, र खाना तयार.
किनभने THRIVE दैनिक मेनू योजनाको लागि विकसित गरिएको थियो, हामीले यसलाई हाम्रो मिशन बनायौं तपाईले खानुभएको भोजनको स्वाद लिनका लागि! टाढा लुकाइन्छ र कहिल्यै प्रयोग नगरिएको अन्य खाद्य भण्डारण उत्पादनहरूको विपरीत, हाम्रो उत्पादनहरु लाई ताजा र महान स्वाद प्रमाणित गर्न समय र समय परीक्षण गरिएको छ. THRIVE खाद्य पदार्थ संग, महान स्वाद मानक हो - यो अपवाद होईन.
सजिलो बनाउनका लागि व्यञ्जनहरू THRIVE को हरेक क्यानमा समावेश गरिएको छ ताकि तपाईं आफूले किनेको खाना भण्डारण कसरी प्रयोग गर्ने भनेर कहिले सोच्नुहुन्न।. किनकि हामी तपाईको परिवारलाई सकेसम्म उत्तम स्वाद र पोषणको आनन्द लिन चाहान्छौं, हाम्रा सबै रेसिपीहरू विशेष रूपमा उत्पादनका लागि विकसित गरिएका छन्.
के तपाईंलाई थाहा छ हामी बिक्री गर्छौं:
आज फलफूल सित्तैमा सुकाइएको खाना खानु आदेश!
मसालेदार टमाटर सूप
कालो बीन साल्सा